न्याय - Lekhapadhi कथा : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी १२ बैशाख २०७८, आईतवार १५:०३ मा प्रकाशित
एक रातमा निर्मला सपनीमा आएर रुँदै, कराउँदै, चिच्याउँदै, छट्पटीदै, अनि चित्कार गर्दै मलाई भन्दै थिइन् !
बुवा मेरो चित्कार नसुन्नेलाई, मेरो खसेको आँशुको भाव नबुझ्नेलाई,मेरो छटपटाहट अनि पीडा नबुझ्नेलाई, मलाई दुख्दा उसलाई नदुःखेर मेरो पिडामा खुशी मनाउनेलाई अदालतको ढोकामा गएर झ्यालखानाकाे चिसो छिडीमा जीवनभरि पिडाको अनुभूति दिनुपर्छ ।
अदालतको ढोका ढकढक्याउदा आफ्नो जायज्यथा सबै सकियो । अन्तमा न्याय पाएको अनुभूति भयो
मैले पनि त्यस्तै गरे। अदालतको ढोका ढकढक्याउदा आफ्नो जायज्यथा सबै सकियो । अन्तमा न्याय पाएको अनुभूति भयो । उसलाई आजीवन कारावासको सजाय भयो । यता अब आफूलाई आफ्नो जीवन जसरी चलाउने भन्ने समस्याले पिरोलिरह्यो । नबस्ने घर छ न कमाउने घर खेत छ । जेनतेन अरूको घरमा दुःख सहेर काम गरेर भए पनि गुजारा चलाइरहेको थिए ।
बाटोमा त्यसैसँग आँखा जुध्न पुगे जसलाई आजीवन काराबासको लागि अदालतले सजाए सुनाएको थियो । म असमञ्जसिए ।
एकदिन कामले बजार हिँडेको थिएँ । बाटोमा त्यसैसँग आँखा जुध्न पुगे जसलाई आजीवन काराबासको लागि अदालतले सजाए सुनाएको थियो । म असमञ्जसिए । मैले न्याय पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्यो । आज उ सजाय पाएको दुईवर्ष नहुँदै मेरो सामुन्ने निर्धक्क घुमिरहेछ ।
मनमा फेरी भयानक अवस्थाको आकृति तयार भए। डराएँ । मेरी निर्मला जस्तै अरू निर्मलाहरुको बारेमा सोचे। अब सब सिद्धियो । बुझ्न गए यो अपराधी किन बाहिर बिना संकोच घुमिरहेको छ ?
मेरी निर्मला जस्तै अरू निर्मलाहरुको बारेमा सोचे। अब सब सिद्धियो ।
प्रतिउत्तर पाएँ- यसको बानी व्यवहार सब ठिक देखिएकोले गणतन्त्र दिवसमा सबै अपराध तथा सजाय मिनाहा गरी आम माफी दिइएको छ ।
अब ऊ अपराधी हैन । मैले आफैले पाएको न्यायलाई धिक्कारे । यहाँ जे पनि हुँदोरहेछ ।
झुटको खेती : लघुकथा आमाकाे माया